ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းလောကီသားတို့သည်အပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ပြွန်ယခုဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းအရာပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ကြောင်းငါသိ၏။ ဒါေပမယ့္အရြယ္ေရာက္ဂိမ္းကစားသူေတြရဲ႕ ကမၻာကေတာ့ေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ ပြောင်းလဲမှုရှည်လျားစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောခဲ့ပေမယ့်နေ့ချင်းညချင်းရောက်လေ၏,အင်တာနက်ကိုသူတို့မရှိတော့မီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါ. ဒါကြောင့်၊ကိုညစ်ညမ်းဂိမ်းစထွက်ချပြီးဂိမ်းအတွက် HTML၅။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းအမှန်တကယ်အပြန်အလှန်ဖြစ်လာသည့်အခါပါပဲ။ ထိုသူတို့ကိုလည်းသင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အခမဲ့အဝတ်အချည်းစည်းလိင်ဂိမ်းမှာကျနော်တို့အင်တာနက်ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သောအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းပေးနေကြသည်။, ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်စက်စက်ဂိမ်းများနှင့်သာဆက်ဆံနေပြီး၎င်းတို့သည်ကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များပေါ်တွင်သင်၏ဘရောက်ဇာသို့တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်သည်၊သင်အသုံးပြုနေသည့်လည်ပတ်မှုစနစ်မရှိပါ။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များအပြင်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလည်းသင်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်အပေါငျးတို့သမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ရှိပါတယ်တဲ့စာကြည့်တိုက်နှင့်အတူလာမယ့်။ အရာအားလုံးကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လောကကြီးမှာသင့်စိတ်တိုင်းကျဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အခွင့်အရေးပေးပါ။ ဤအသစ်ဂိမ်းအချို့ကိုသင်ဇာတ်ကောင်များနှင့်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သောစိတ်ကူးယဉ်လူတစ်ဦးကြကုန်အံ့တံ့သောတိုးမြှင့်စိတ်ကြိုက်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ သင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပါစေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များပင်ရှိသည်။ တဖန်သင်တို့အခမဲ့အဝတ်အချည်းစည်းလိင်ဂိမ်းအပေါ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာအားလုံးမျှမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူသင်တို့ထံသို့လာကြ၏။, ကျနော်တို့ကညစ်ညမ်းနှင့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှကြွလာသောအခါကျနော်တို့စုစုပေါင်းအမည်မဖော်အတွက်ယုံကြည်ပါတယ်,ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်လိုအပ်သင်အသက် 18 နှစ်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုခလုတ်ကိုထိပြီးတာနဲ့အားလုံးဒီနိုးထမှုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲပျော်မွေ့ရင်းသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်တို့အဘို့ဂိမ်းများရှိလိမ့်မည်ညစ်ညမ်းပန်ကာ၏အဘယ်အရာကိုမျိုး။ ကျနော်တို့ကဒီစုဆောင်းမှုနှင့်အတူညစ်ညူးအပေါငျးတို့သအဆင့်ဆင့်ကိုဖုံးအုပ်နေကြသည်။ ဂိမ္းထဲကအခ်ိဳ႕အရာေတြကစိတ္အားထက္သန္မႈဘက္မွာပိုပါတယ္။ ငါတို့သည်သင်တို့လာမယ့်အအေးဆုံးယင်းမှပြီးပြည့်စုံသောလိင်ဘဝအသက်ရှင်ရန်ရထားတဲ့အတွက်ရည်းစားအတွေ့အကြုံစွန့်စားအတူဂိမ်းရှိသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အရှက်၊အကြောက်၊အကြောက်၊အကြောက်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုမယ့်ဂိမ်းတွေရှိပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အေးမြရဲ့ကစားသမားသူတို့အမြဲလိုလိုင်ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရကြလိမ့်မည်သည့်အတွက်ရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောမိသားစုကောင်လေးညစ်ညမ်းဂိမ်းအဖြစ်ကာတွန်းကနေသူငယ်,အတူဂိမ်းများ,သင်အေးခဲနေတဲ့ကနေအဲလျဆာကိုဖျတ်နိုင်သည့်အတွက်ချိုမြိန်လိင်ဂိမ်းများနှင့်ပင်ဂိမ်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ တ်ဆင်ထားသောဂိမ်းများနှင့်နဂါးဘောလုံးလိင်စွန့်စားမှုများပါ ၀ င်သည့်ဂိမ်းများနှင့်လာသည်။ ထို႔အျပင္ဂိမ္းကစားျခင္း(သို႔မဟုတ္)စတားလင္းရဲ႕ ကစားကြက္ေတြနဲ႔လည္းကစားႏိုင္ပါတယ္။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏စုဆောင်းမှုကိုလည်းသင်ရိုင်းသောအလိုဆန္ဒအချို့ကိုနှစ်သက်နိုင်မည့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အပိုင်းနှင့်အတူလာသည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ယင်းကိုထိုးချင်ပြီလော ကောင်းပြီ၊သင်ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဂိမ်းများနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းအတူတူစတိုင်အတွက်ခြေကစားဂိမ်းရှိသည်နှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏အမာခံနဂါးလိင်ဂိမ်းထဲမှာလှည့်ကွက်နှင့်အတူခကျြကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ တောင်မှအမွေးနိူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါ်အရေးယူခံစားနိုင်,ငါတို့သည်ငါ၏နည်းနည်းမြင်းညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူဂိမ်း၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်။ သင်သည်ဤဆိုဒ်နှင့်ပိုပြီးအပေါ်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်အရာအားလုံးတကယ်ရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ယနေ့ညအရာအားလုံးပျော်မွေ့သွားနေငါသိ၏!
သငျသညျအမြဲ,သင်ရုံအဲဒီမှာထိုင်သောအခါညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့သွားလျှင်,ငပဲပေါ်တဦးတည်းလက်,လူတွေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပျော်မွေ့နေစဉ်,ထို့နောက်သင်မှားလုပ်နေ. ဤကာလ၌,ညစ်ညမ်း၏ကမ္ဘာပေါ်မှာအရာအားလုံးအပြန်အလှန်အကြောင်းပါ။ ကျနော်တို့ဖန်တီးသောဆိုက်နှင့်အတူသင်သည်သင်၏ညစ်ညမ်းဖျော်ဖြေရေးရလမ်းကိုပြောင်းလဲရလိမ့်မယ်။ သငျသညျအရေးယူထိန်းချုပ်တဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျပျော်စရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်နှငျ့သငျလိုခငျြသို့သော်စွန့်စားစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရုံဆိုက်ပေါ်ရအခမဲ့အဝတ်အချည်းစည်းလိင်ဂိမ်းတွေနဲ့သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်၏မာစတာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ရေးနေအခါတိုင်းပြန်လာရန်သေချာစေပါ!